Enda Girinhi: 5 Nzira dzekurega kushandisa maCD nemaDVD | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 25, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Sekureva kweEPA, 5.5 mamirioni emaCD, kurongedzwa kwavo uye mamirioni emaimwe maCD emimhanzi anokandirwa gore rega rega pasina kushandiswazve. MaCD nemaDVD anogadzirwa kubva kuAluminium, Goridhe, Madhayi, zvimwe zvakasiyana zvigadzirwa - asi kwazvo zvese Polycarbonate uye Lacquer. Polycarbonate neLacquer zvinogadzirwa zvakananga kubva kumafuta asina kuchena.
Iwo matanho anoramba achienderera, mwedzi wega wega zviuru zana zvemazana emaCD nemaDVD zvinopera zvakare. Iko hakuna nzira inoshanda yekudzokorodza izvo zvigadzirwa futi! Zvinoenderana ne Indasitiri Yemafuta pachezvayo, angangoita 1.1 galoni pabhari yega yega (marita makumi mana nemaviri) emafuta anoenda kumagetsi.
Ini ndinofunga zvinopera pasina kutaura, saka, kuti switching kune gore computing ne virtualized maseva uye kunyorera kuSoftware seSevhisi kunyorera kunogona kubatsira nharaunda. Handina chokwadi chekuti chikamu chei chegiramu remafuta chinopinda mukugadzira macompact discs, asi zvirokwazvo tinogona kuve nekunyatso shanda nekushandisa madhiraivha e USB uye netiweki dzekugovana faira panzvimbo pekupisa ma disc.
Pamusoro pe kushandisa ma discs, handigoni kubatsira asi kufunga kuti pane simba rakawanda riri kushandiswa zvisina basa kugadzira uye kutakura iwo ma disc. Chokwadi kuchinjanisa bandwidth yepurasitiki kuchaita mhedzisiro yakanaka kune vanhu, handiti? Ndinoziva kuti varipo zvimwe zvinhu zvakawanda izvo zvinoita basa rakakura, asi sei pasina munhu anotaura nezve iyi indasitiri isingakoshi?
Hameno kuti sei uchishandisa Software somunhu Service hachisi chinhu chakakosha che Kuenda Green kuraira kumabhizinesi? Terabyte madhiraivha akaomarara, madrive USB, Backups dzepamhepo… zvese izvi zvinowanikwa nyore kuti chero munhu ashandise. Hapana munhu anofanira kunge achitenga maCD nemaDVD futi. Ini handitombo rent mamovie zvekare paDVD, ini ndinoahaya pane yangu Apple TV!
5 Mazano Ekudzora Iwe Wako CD Kupindwa muropa
Chinja kuSoftware seSevhisi. Mienzaniso: Dump Microsoft Office yeGoogle Apps uye Microsoft CRM yeSalesforce. Hapana kuiswa, hapana mabhakiti, hapana Hardware… ingori bhurawuza!
Chinja kubva kunorenda maDVD uye utenge mimhanzi maCD kurodha pasi yako yeMumhanzi kutenga kana Movie Rentals ne iTunes, AppleTV uye mamwe masevhisi eprimiyamu. iTunes ingafanira kufunga zvakare logo yavo!
Chinja kubva kutsigira kumusoro uye kutakura data pane maCD nemaDVD kuenda kuUSD Drives. Madhiraivha e USB anobata yakawanda data uye anotakurika, nekukurumidza, uye hausimbe. (Chenjera, hazvo, kwete ese madhiraivha e USB akagadzirwa akaenzana! Ini hapana kwandinoenda ndisina yangu Western Dhivha Pasipoti, ndiyo mari yakanaka kwazvo yandati ndamboita!
Chinjana mafaira makuru kune mamwe makambani kuburikidza nepamhepo SaaS vatengesi senge donhedza send, YouSendIt, SendThisFile, MailBigFile, uye SendSpace.
Bvisa maCD ako neDVD. Paunoraira yako inotevera laptop, usasanganise imwe nekutenga. Paunovarongera kuhofisi yako, chengetedza imwe mari uye utenge madhiraivha eUSB panzvimbo yekuvandudza DVD rako munyori. Nekusavaita kuti vasvike, unenge usisakwanise kuenda uye kupisa iyo inotevera CD!
Muchokwadi, chikonzero chega nei ndichishandisa maCD zvekare ndechemabhuku ari paCD kana kupisa mimhanzi yekutyaira kwangu kuenda nekudzoka kubasa. Ndanga ndichiona mitengo, zvakadaro, uye ini ndinogona kuwana yekutsiva mota stereo ine USB yekuisa pamwe nePod zvinodzora zvisingasviki $ 200! Pamwe inguva yekuti ndifambe!
Aug 28, 2008 na1:07 PM
Murume, handina kuziva kuti tese tinoshandisa maCD nemaDVD akawanda sei kusvika ndaverenga tsamba yako. Kunyangwe ndichigona kutaura ndichidada ndatoita #s 1, 3 uye 4 pane yako runyorwa!